Brezila: Tandindonin-doza ny hoavin’ny ala · Global Voices teny Malagasy
Brezila: Tandindonin-doza ny hoavin'ny ala
Voadika ny 22 Mey 2011 13:04 GMT
Vakio amin'ny teny Português, Français, Español, 繁體中文, 简体中文, русский, English
Ity lahatsoratra ity dia ampahany amin'ny tatitra manokana ataonay momba ny Fijerena ifotony ny Ala: Amazon.
Tao anaty herinandro vitsivitsy, voatonontonona ny kongresim-pirenena breziliana miaraka amin'ny fanerena handany ny lalàna vaovao mifehy ny rano sy ny ala.Ilay tetikasa natolotra izay nifantoka tamin'ny fanovana ny lalàna efa nisy teo aloha dia tohanan'ny fivondronan'ny solombavam-bahoaka atao hoe “Ruralist front” na ny mandatehezan'ny Tantsaha. Nahatonga fifanoheran-kevitra ilay tolo-dalàna ny tapaky ny taona 2010, izay nitovy ny tamin'ny volana desambra tamin'io taona io ihany, nitranga fanihefany indray ny olana fony tsy naha tao Cancun ireo mpandala ny tontolo iainana noho ny COP 16.
Ilay tetikasa niadian-kevitra dia ny mba hametrahana rafi-pitantanana vaovao momba ireo ala sy faritra 6 arovana ao Brezila: Caatinga, Cerrado, Pampas, Atlantic Forest, Pantanal sy Amazon. Ny lojika nitondrana ilay tetikasa dia ny momba ny fambolena mitodika amin'ny tsenam-barotra na “agribusiness” izay tsy nahazo vahana tamin'ny lalàna teo aloha ary tsy nahazo tombotsoa ho fampandrosoana ny toe-karena i brezila.
Niala tao Amazona ireo fiara be mpitatitra hazo. — Fandripahana ala sy orinasa fanodinana hazo ao Amazona. Sary avy amin'i Christian Franz Tragni, fizaka-manana Demotix (18/02/2009)
Lalàna mifehy ny rano sy ny ala
Ilay tolo-dalàna mifehy ny rano sy ny ala dia manoritsoritra ‘fampivondronana ny faritra any ambanivohitra’ ary ahitàna vontoaty maro mahabe resaka: fanaovana ireo toeram-pambolena rehetra ho manara-penitra (fanomezana famotsoran-keloka ireo tompon'andraikitra tamin'ny fandripahana ala nahatonga azy ireny); fampihenana ny faritra manodidina na amoron-drano ho arovana ( antsoina hoe ‘varzeas’ sy ‘igapos’ amin'ny fiteny portiogezy); fahafahana mifehy sy mampiasa ny velaran-tany mihoatra ny 1800 metatra (izay arovana amin'izao fotoana izao) ho amin'ny fambolena; fanovàna ny fitsipiky ny faritra voaaro maharitra (APP) mba hosoloina sata vaovao noforonina ao amin'ny fanjakana Breziliana isan-tokony; fanesorana ny tsy maintsy hanasiana faritra voajanahary arovana any amin'ireo faritra efa bitika; fahafahana mamboly karazan-kazo eo amin'ireo tany efa simba ( mba tsy ireo karazana izay efa zanatany teo ihany ); ary fahafahana mameno ireo tany lany tsiro aminà faritra arovana any an-toeran-kafa ( izany hoe ny faritra iray ripaka ao amin'ny alan'i Atlantika dia azo soloina aminà faritra voaaro any Cerrado) ary tsy ho an-tery ny asa fanarenana ireo toerana voajanahary simba any amin'ireo faritra bitika.
Ny tsaho mandeha araka izany dia ny hoe ny foto-kevitry ny solombavam-bahoaka federaly tao amin'ny Antoko Kaomionista Aldo Rebelo nankao amin'ny kongresy tamin'ny 10 may dia vao avy nofaranana mialoha ny antso ho amin'ny latsa-bato . Nahatonga tabataba izany tsaho izany ary nampiato ny fivoriana noho ny tsy faneken'ireo Solombavam-bahoaka maro hamaly ny antso ho amin'ny fetran'isa farany ambany ilaina noho ilay foto-kevitra narafitra tsy azo nodinihana akory nialohan'ny latsa-bato.
Vokatr'izany, nasaina hifidy làlana mbola tsy hitan'izy ireo akory izany ireo solom-bavam-bahoaka ireo. Ny minisitry ny tontolo iainana teo aloha sady mpilatsaka ho filoham-pirenena, Marina Silva (@silva_marina) dia nandefa bitsika ny 10 May [pt]:
Não se sabe quais propostas da sociedade e do governo estão no relatório do Aldo. Será um desrespeito se o Código Florestal for votado hoje.
Tsy fantatra izay tolo-kevitra ao amin'ny tatitr'i Aldo na ny nataon'ny fiarahamonim-pirenena na ny an'ny governemanta. Tena feno tsy fanajana tanteraka raha lany amin'ity androany ity ilay lalàna mifehy ny rano sy ny ala.
Ny 12 May, araka ny fampahatsiahivan'ireo Solombavam-bahoaka ny hafatr'i Marina Silva mba hangatahana fotoana misismisy kokoa handinihana ilay tatitra, nanameloka ny vadin-dRamatoa Marina Silva amin'ny fifanaovana taratasy tsy ara-dalàna i Aldo Rebelo. Nambarany ihany koa fa fony mbola solombavam-bahoaka ny vadin'i Marina, tsy nahomby izy tamin'ny fanenjehana hanoherana ny famoahana hazo antsokosoko. Araka izany fanambarana izany izay nalefa tamin'ny fahitalavitra, i CiFuDetube (fanafohezan-teny ho an'ny maha-olom-pirenena, ny hoavy ary demokrasia), mpampiasa Youtube dia niantso fanonganana an'i Aldo Rebelo, noho izy naneho fitondran-tena tsy mendrika dia ny fanaovana zinona ankarihary.
Indostria ara-tsakafo, hoavin'ny toekarena Breziliana?
Araka ilay mpanao gazety João Peres [pt], mpanoratra ao amin'ny Rede Brasil Atual, ny “manatehezan'ny tantsaha” dia ahitana solom-bavambahoaka 170 ary loholona18 izay manohana tsy ampisalasalana ny indostria ara-tsakafo ary ny sasany aza dia mpamboly mihitsy. Kátia Abreu solombavam-bahoaka fata-daza ao amin'ny mandatehezan'ny tantsaha, fa mpamokatra lehibe amin'ny indostrian-kena. Nanomboka ny taona 2008, Prezidan'ny konfederasiona Brezilian'ny fambolena sy fiompiana omby (CNA) izy ary dia naniry ny hahalanian'izany lalàna vaovao izany. Mrs Abreu (@KatiaAbreu) dia nibitsika [pt] fa “Apetraka amin'ny fomba ara-demokratika sy ara-drariny ny fanatsarana ny ny lalàna momba ny Rano sy ny ala”. Mbola nibitsika ihany koa izy ho fiarovana ny ezaka nataony [pt]:
Não somos desmatad1ores. Não exploramos madeira em reserva ambiental. Somos produtores de alimentos. Sustentamos o Brasil. #codigoflorestalja
Tsy mpanapaka ala izahay. Tsy mitrandraka hazo amin'ny valan-java-boary. Fa mpamokatra sakafo. Manohana an'i Brezila izahay. #forestrycodenow
Nandritra ny COP16, ny solombavam-bahoaka Abreu (mpikambana ao amin'ny Antoko sosialy demokraty), dia notolorana mari-pakasitrahana volamena Golden Chainsaw [pt] avy amin'ny Greenpace Brezila, ho fankasitrahana ny “ezaka vitany manoloana ny fandripahan'ala.
Ny fihitaran'ny fanimbana ny Ala ao amin'ny Ala mandon'i Amazona – Ny Ala mandon'i Amazona any Brezila dia manana velaran-tany 5850km2 raha ny sori-taniny ara-dalana izay voakapa nanomboka ny volana Aogositra 2009 ka hatramin'ny Aprily 2010,araka ny tatitra avy amin'ny INPE- Instituto de Pesquisas Espaciais. Sary nalain'i Ronnie Luis Leite, copyright Demotix (20/11/2007).
Ny solombavam-bahoaka Aldo Rebelo,mpikambana ao amin'ny Antoko kaominista Braziliana (PCdoB), no tompon'andraikitra mpanohana ny lalàna mifehy ny Rano sy ala vaovao natolotra tao amin'ny kongresy. Mr. Rebelo has taken an uncompromising stand for the project. Andriamatoa Rebelo dia tsy milefitra raha ny momba io tetik'asa io. Na dia teo aza ny fifandraisany tamin'ny fiadidian'i Dilma Rousseff, dia nampiseho fankatoavana lalina tamin'ny tolon-kevitra nasehon'ny mandatehezan'ny tantsaha izy, raha miohatra ny tolon-kevitra mihaika nasehon'ny fiadidian'ny repoblika.
Manoratra ao amin'ny blaoginy Diário do Verde (Diary Maitso) [pt] Rafael Chiaravalloti momba ny voka-dratsin'ilay lalàna vaovao mifehy ny Rano sy ny ala, ary, niantso an'i Aldo Rebelo hoe saribakoly vori-damba:
Aldo Rebelo, um ex-militante da luta pela democracia na época que os militares criaram o código, é apenas uma marionete desse processo.
Aldo Rebelo, mafana fo teo aloha tao amin'ny tolona ho amin'ny demokrasia anoherana ny lalàna miaramila – tamin'ny fotoana namolavolana ilay lalàna – dia toy ny sari-bakoly vori-damba amin'izao raharaha izao.
Nandà ilay tolo-kevitra ny mpandala ny tontolo iainana sy ny siantifika
Noho izy voakasika amin'ny tanjak'ireo hery tao ambadik'ilay lalàna mifehy ny Rano sy ny ala, ireo fikambanana tsy miankina miaro ny tontolo iainana toy ny Greenpeace Brezila sy WWF-Brezila ary ny toeram-pikarohana toy ny ISA – Instituto Socioambiental (Foibe Ara-sosialy sy ara-tontolo iainana) – sy IPAM – Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Foibem-pikarohana ara-tontolo iainana any Amazona) – dia nanambatra ny heriny tamin'ny taona 2010 hanohitra ilay lalàna vaovao mifehy ny ala. Ny vohikala SOS Florestas (SOS Ala) [pt] dia nisafidy ny hanome vontoatiny mba hanitsiana ny vaovao diso miely. Ny tohan-kevitra ao dia ny hoe nisy ny lainga[pt] nandaingana momba ny fomba nandrafetana ilay lalàna vaovao, ary tena ilaina noho izany ny mampiely ny mety ho voka-dratsiny eo amin'ny tontolo ara-boajanahary any Brezila.
Nanao fanangonan-tsonia tamin'ny aterineto [pt] niaraka tamin'ny Avaaz izany vohikala izany hitazonana ny lalàna mifehy ny Rano sy ny Ala amin'izao fotoana. Ao amin'ny Twitter, ampiasaina ny tenifototra #SOSFlorestas ary nisy a video [pt] novokarina ho fampahafatarana ny mety ho voka-dratsin'io lalàna vaovao natolotra io, indrindra indrindra ny mba hampitsaharana ny fanerena ny faritra arovana amin'ny Reny ala ho toerana voatokana,ary ny famerana ambany indrindra ny faritra arovana maharitra ho havoana sy sisin-drenirano, izay misy fiantraikany goavana ho an'ireo tanàn-dehibe.
Ny Fiarahamonina Breziliana ho Fampiroboroboana ny Siansa (SBPC) sy ny Akademia Breziliana momba ny Siansa (ABC) dia niroso tamin'ny fanohanan-kevitra ho famerana ho roa taona[pt] Niara-nanaiky ny roa tonta fa tokony hovaina io lalàna io, nefa samy niaiky ny tsy fahampian'ny fahalalana ara-tsiantifika izay ilaina amin'ny fikasana vaovaon'ny toerana voaaro teo aloha io tolo-kevitra io, mba ho fanatsarana ny fiarovana ny sisin-drenirano sy ny fiovana hafa.
“Aldo Effect”: Tsy mitsaha-mitombo ny fandripahana ala
Just a few days ago, nitatitra[pt] ny Instituto Centro de Vida (ICV) sy Imazon, foibe roa izay manao fikarohana sy miaro ny fitantanana maharitra ny valan-java-boary any Brezila, fa niakatra ny fandripahana Ala [pt] tany amin'ny faritr-i Mato Grosso,raha oharina amin'ny fiakaran'ny tahan'ny fandripahana ala teo aloha:
Em abril de 2011 o desmatamento atingiu 243 quilometros quadrados em Mato Grosso, o que corresponde a aumento expressivo de 537% em relação a abril de 2010 quando o desmatamento somou apenas 38 quilometros quadrados.
Ny volana Aprily 2011, nahatratra 243 km2 ny fandripahana ala tany Mato Grosso, izay mifanaraka amin'ny fitomboana goavana hatramin'ny 537% raha oharina ny tamin'ny Aprily 2010, rehefa nahatratra hatramin'ny 38 km2 ny fandripahana ala..
Azonao jerena ato ny saritany sy grafika [pt] mampitaha ny tahan'ny fandripahana ala ao Mato Grosso nandritra ny efa-taona lasa. Araka ny filazan'i Leonardo Sakamato mpanao gazety, hazakazaka mankany amin'ny fandripahan'ala izany, noho ilay lalàna vaovao manome famotsoran-keloka ho an'ireo tantsaha. Izany dia nantsoin'ireo mpandala ny tontolo iainana hoe “Aldo Effect”.
"Arovy ny alantsika – Tohano ny lalàna mifehy ny ala" Sary avy tamin'ny bilaogin'ny AASPAFF (Fikambanana hoan'ny Asa Sosialy sy Fiarovana ny Rano sy Biby ary ny Zava-maniry ao avaratr'i Chapada), nahazoana alalana.
Niseho tamin'ny toeran-kafa tao amin'ny firenena koa ny fihetsiketsehana, toy ny tao amin'ny tanàna kelin'i Jacobina, Bahia. SOS Florestas dia nanaitra ireo mponina mba ho tonga hanatrika ny fihetsiketsehana goavana ny Alahady 22 May, tao São Paulo.
Ity lahatsoratra ity dia nahitsin'i Lou Gold.
Nandà ilay tolo-kevitra ny mpandala ny tontolo iainana sy ny siantifika0